Moe Kai: Olympics experience
ကျမအနေနဲ. ငယ်စဉ်ကစလို. ယဉ်ကျေးလိမ္မာမှု ရှိအောင် သင်ကြား ပျိုးထောင်တာပဲ ခံခဲရပါတယ်။ သူများ မဟုတ်တာ လုပ်နေတာ၊ အလုပ် သိပ်မကြိုးစားတာ စတာတွေကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် ပြောရမယ် ဆိုတာမျိုးက အလေ့အကျင့် သိပ်မရခဲ့ပါ။ အဲဒီတော့ အဲဒီလို ပြောရမယ့် အခါမျိုးတွေဆိုရင် ကျမကို စိတ်ဖိစီးမှုပိုစေတာပါဘဲ။
အရင်ထဲက အလုပ်ခွင်မှာ၊ အထူးသဖြင့် အလုပ် အရမ်းရှုပ်တဲ့ အရေးပေါ်ဌာနမှာ လုပ်ထဲက ဂျူနီယာ ဒေါက်တာတွေ အလုပ်လုပ်တာ နှေးနေရင် ကျမက In charged doctor အနေနဲ. မကြာခဏ ပြောရတာတွေ ရှိပါတယ်။ ပြောရတိုင်းလဲ ကျမမှာ မျက်နှာက ပူ၊ စိတ်မချမ်းမသာ ဖြစ်ရပါတယ်။ ကိုယ်သာ အလုပ် ဆယ်ဆ ပိုလုပ်ပြစ်လိုက် ချင်တော့တယ်၊ သူများကို ပြောရမယ့် အလုပ်တော့ မလုပ်ချင်ခဲ့ပါ။
အခု အိုလန်ပစ်မှာလဲ အတူတူပါ။ နေ.စဉ် ကျမကို စိတ်ဖိစီးစေတာတွေက အသင်းသားတွေ ကောင်းကောင်း ပြုမူ ဆက်ဆံတာတွေ မလုပ်တဲ့ အခါမှာပါ။ ဥပမာ ကျမတို.တွေဟာ ကွင်းရဲ့ ရှေ.တဲ့တဲ့မှာ နေရတာဆိုတော့ လူအားလုံးက မြင်နိုင်ပါတယ်။ ကျမတို. အနေနဲ. ဟိုအသင်း ဒီအသင်း အားပေးတာ လက်ခုပ်တီးတာ ဓါတ်ပုံပဲ လျှောက်ရိုက်နေတာ မျိုးတွေ မလုပ်ရပါ။ profesional ကျကျ ရှေမှာထိုင်ပြီး ဒါဏ်ရာရသူရှိက အမြန် ကယ်ထုတ်နိုင်အောင်၊ အမြန်ကုသမှုတွေ လုပ်နိုင်အောင် ဆိုတာတွေ ပြင်ဆင်ထားရပါတယ်။ ကျမရဲ့ အဖွဲ.သား တချို.က ပရိသတ်က ဆူအောင်အားပေးတော့ အားတွေ အတင်းပါပါသွားပြီး သူချင်းတွေလိုက်ဆို၊ ဟေးဟေးဟားဟား လိုက်အော်ဆို၊ သူတို.ကို ကျမက လိုက်ဆွဲတာတွေ သတ်ိပေးတာတွေကို လုပ်ရပါတယ်။ အားလုံးကိုလဲ အချိန်မှန် အားလပ်ချိန် နားချိန် ရအောင်၊ အစာစားချိန်ရရအောင်လဲ ကျမက သတိထားပြီး အချိန်စာရင်းတွေ ဆွဲပေးရပါတယ်။ တယောက်ထဲ ဆေးခန်းထဲ အကြာကြီး မထိုင်နေရအောင် အလှဲကျ ပွဲထွက်ကြည့်ရအောင်လဲ စီစဉ်ပေးရပါတယ်။ ဆေးကုရတာ ပျော်ပေမယ်၊ ဒီကပ်ပါလာတဲ အုပ်ချုပ်မှု အလုပ်တွေကတော ကျမကို ခေါင်းခြောက်စေတာ အမှန်ပါ။
ဘောလီဘောအားကစားကတော့ ကြည့်ရင်းနဲ. ကျမတောင် တော်တော် စိတ်ဝင်စားသွားပါတယ်။ ကစားသမားတွေက မိန်းမ၊ ယောက်ျား အများစုက အနဲဆုံး ၆ပေကျော်ကြပါတယ်။ ရ-ပေကျော်တဲ့သူတွေလဲ မနဲပါ။ သူတိုကြားက ကျမဖြတ်လျှောက်သွားရတော့ ကျမအရပ်က သူ.တို.ရဲ့ ခါးလောက်ပဲ ရှိမယ်လို. ထင်ရပါတယ်။
မှတ်မှတ်ရရ အတွေ. အကြုံလေးကတော့ သတိထားနေတဲ့ ကြားက တချက်ကလေး သတိလွှတ်သွားတုန်း ကျမ မျက်နှာကို ဘောလုံးလာမှန်တာပါဘဲ။ နှာခေါင်းရိုးကျိုးပြီး ဘီဘီစီ သတင်းထဲပါတော့ မလို.ပေါ့။ တော်ပါသေးတယ် သွပ်သွပ်သွပ်လို.ပဲ ပြောမိပါတော့တယ်။